Manchester City oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Aston Villa oo ay ku booqatay garoonka Villa Park… +SAWIRRO – Gool FM
(England) 22 Abriil 2021. Manchester City ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay Aston Villa oo ay ku booqatay garoonka Villa Park, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester City.
Daqiiqadii 1-aad ee dheesha Aston Villa ayaa hoggaanka u qabatay waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda John McGinn, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Ollie Watkins.
22 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Manchester City ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhigay ciyaarta Phil Foden oo caawin ka helay saaxiibkiis Bernardo Silva.
Daqiiqadii 40-aad Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-2 ka dhigay Rodri oo ka faa’ideystay kubad gees ka laad ah uu soo tuuray Bernardo Silva.
44 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Manchester City ayaa noqotay 10 xiddig oo kaliya kaddib markii kaarka roosaha oo toos ah la siisay daafaca reer England ee John Stones.
Si la mid ah daqiiqadii 57-aad garsoosaha dhex dhexaadinaayay dheesha ayaa wuxuu ka dhigay ciyaarta garba siman kaddib markii uu sidoo kale kaarka roosaha siiyay xiddiga kooxda Aston Villa ee Matty Cash.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-2 ay kaga soo adkaatay Manchester City kooxda Aston Villa oo ay ku booqatay garoonka Villa Park, City oo fadhisa fiida sare ee horyaalka Premier League ayaa heysata 77 dhibcood, waxana 11 dhibcood ka sarreysaa Man United oo kaalinta labaad ku jirta.